I-Stationery ne-University Library - I-Delta Copy House Messina
Kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu
Ihhovisi: Nge-Pietro Castelli
Ihhovisi: Nge-Cesare Battisti
Ihhovisi: Nge-XXIV Maggio
NgoMgqibelo: 8:00-13:30 / 16:00-20:00
Kulabo abazimisele abafuna konke okudingeka bakufunde
5.0 /5 amavoti (amavoti angama-41)
Stationery, isikole nomtapo weyunivesithi kanye okunezinhlobonhlobo ezinkulu ze imibhalo yemfundo: I-Delta Copy House uphawu lomhlaba a Messina ekuvuseleleni kwe izincwadi zesikole ed eyunivesithi. Inhlanganisela ephumelelayo eyodwa Isitolo sezinto zokubhala futhi eyodwa Umtapo wezincwadi, kuyiphuzu lereferensi labafundi nabachwepheshe. Ukunikezwa kwensiza izithombe futhi kungukuthengisa okugunyaziwe kwe izinto zokubhala zesikole nezehhovisi, amathoyizi, imibhalo yezomthetho, amanothi ezifundo zasenyuvesi e igajethi.
I-Stationery ne-Bookhop ifakwe ama-Academic Texts: I-Delta yindawo yokuhlangana yabafundi nabasebenza kuyo yonke iminyaka
i-cartolibreria okunezinhlobonhlobo eziningi ze imibhalo yemfundo e isikole etholakalayo kubafundi nothisha: I-Delta Copy House, iminyaka engaphezu kwemi-5, a Messina kuyinkomba eyiqiniso yokubhekisela emkhakheni we Izinto zokubhala kanye ne ezitolo ezidayisa. USanto no-Emanuela, ngemuva kokusebenza ebhizinisini lakwaGilibtiti, baqala ezabo Isitolo sezinto zokubhala, okuyiwo namuhla ugcotshwa kakhulu edolobheni imikhiqizo yokubhala, zombili ze scuola lokho ihhovisi. Delta yi i-cartolibreria ehlanganisa lo mkhakha isikole neyunivesithi i-coi imikhiqizo ye chancellery ezingomkhiqizo othembeke kakhulu emkhakheni. Ngenxa yodumo oluhle kakhulu, umphumela we-assortment enkulu amapeni, izincwadi zokubhalela, i-carpette, amathayi, ukugqamisa, amapensela nabo bonke abanye izinto zokubhala ebaluleke kakhulu esikoleni nasehhovisi, i Izinto zokubhala zeDelta kubaliwe namuhla Amaphuzu ayi-3 athengisiwe emigwaqweni emikhulu yedolobha.
Imibhalo yezifundo kanye nezincwadi zesikole, i-Stationery nezithombe: izinsizakalo ezibalulekile ukukusiza ukuthi utadishe
I imibhalo yemfundo uzothola at I-Delta Copy House stationery kanye ne-shophop, a Messina, ahlelwe ngokucophelela futhi akhethwe yi Emanuela. Uthole iziqu Umthetho, umnini-mnikazi uyazi umhlaba ukuhlolwa kwezomthetho ed izifundiswa, futhi eyazi ukuthwebula izidingo zabafundi bayo yonke iminyaka. Ngisho vula kufakwe kothisha bamakhono ahlukahlukene, bathokozela ukuthembeka okuphezulu kanye nesikhathi sokuthola. Akukho ukushoda kwe i izincwadi zamukelwa ezifundweni ze Psychology, ubuhlakani obuhlangana nenye yezitolo, e imibhalo yesikole neyunivesithi, okusha okusha futhi okusetshenzisiwe.
Izincwadi zaseNyuvesi nezinto zesikole: ngeCartoLibreria Delta Copy House uzoba umfundi oyisibonelo
Le ama-stationers, ngesikhathi sesikole, bagcwala izitshudeni nabazali abakhathazekile ngokuhlomisa izingane zabo ngokwanele. Eminyangweni Isitolo sezinto zokubhala okwethu Izitolo ezi-3 maphakathi ne Messina, abancane kakhulu bayokujabulela ukukhethwa amadayari, izikhwama, amapeni, izincwadi zokubhalela, izindatshana ngu chancellery e igajethi lemikhiqizo eyaziwa kakhulu. Ukubiza nje abambalwa: Isikhombisa, uComix, uStabilo, uFila, uPelikan nabanye abaningi. Kujabulisa izingane, kwelinye lamaphuzu we i-cartolibreria, ungathenga amathoyizi e imibono yesipho okumnandi futhi kumnandi. Ephuzwini Kopisha iNdlu Izinsiza zefeksi, isithwebuli kanye ne-imeyili ziyatholakala.
Izinto zokubhala zesikole nehhovisi nezinsizakalo zokulungiselela izihloko zeziqu
Isebenza kahle njengoba zombili Isitolo sezinto zokubhala ukuthi kanjani Umtapo wezincwadi, I-Delta Copy House inikeza okungaphezu kwensizakalo ukwakheka e ukubopha di thesis of iziqu. Izisebenzi ezikhethekile ze i-cartolibreria iyakwazi ukunikela ngokubonisana, nezinsizakalo ukushaya e isibuyekezo yemisebenzi ebaluleke kakhulu empilweni yakho. Ngemuva kokukuxhasa endleleni kwezemfundo ne ukubhuka futhi i Ukuhweba di izincwadi zasenyuvesi, Delta uzokujabulela ukuhambisana nawe isinyathelo esisodwa kude nesiphelo. Kube bonke izitolo di Messina, empeleni, uzothola nemikhiqizo yokugubha yonke iminyaka eyisikhumbuzo.
Ikheli: Nge-Pietro Castelli, 26/28
Isihlalo 2: I-Via Cesare Battisti, 137
Isihlalo 3: Via XXIV Maggio, 93 / A
Ucingo: 090 6783564 (Via P. Castelli)
Ucingo: 090 6406381 (Via C. Battisti)
Ucingo: 090 6406630 (Nge-XXIV Maggio)
Inombolo ye-VAT: 03084190838